Oromo News 04.17.21 | KWIT
Oromo News 04.17.21
By Fatiya Adam • Apr 16, 2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa Covid-19 duee 13 yoo tau namni haarawa qabame ammo 468 dha. Guyyaa har’aa Woodbury County keessati, lakkoofsi nama haarawa qabame 11 dabalee akka jiru himan. Guyyaa kaleesa namni 1 akka due gaabasan, fi Waliigalatti Woodbury County keessati namni waliigalatti due 220 dha.
Barattooni South Sioux City High School guyyaa har’aa akka hiriirati dabalamaniif yaamamani turan. Akkaata gabaasa Facebook tti, kan akka ala itti ba’an seaati 3:30 p.m karoorfame ture. maxxansaan isaan qabatan barattooni kan gaafatan miseensi Community akka bakka waliin fudhatuudha.
Garuu administrators schoola akka jedhetti gosti demonstration sanii akka hin hayyamamne himaan. Torbaan darbe keessa, barattooni 100 itti gaafatamtoota mana barumsaa irrati sodaa mullisuudhaaf racial administrators, freedom amantaa, fi gargaarsa barattoota LGBTQ akka tae himan.
March keessa haali qilleensa ooa kan dhufee akka turee fi ijaarsi Iowa keessa dabalee dhufuudhan hojiin akka jiatti ol dabaluu taasise.
State akka gabaaseti March keessa hojattoota 1.5 kan turan yoo tau, February irraa nama 15,000 dabalee jira, akkaata gabaasa U.S Bureau kan Labor Statistic akkaa jum’aa bahetti. Akkaa wagga taree tarte corona virus jalqabe booda dalagaa laafa kan dhufe ture Iowa keessato hojattooni jia 10 fi 12 keessa dabalaa kan dhufeedha.
Lakoofsi Jiraattoni Iowa kan hojii hin qabne March keessa parsantii 3.7% osoo hin jijiiiramin taae jira, kunis February kan walfakkaatudha. Iowa fi Kansas state ameerica keessati kan hojii dhabdummaadhan lakkoofs torba irraa jirtuudha. Ollaan Iowa Nebraska fi South Dakota kan Vermont fi Utah lakkoofsa xiqqaadhan kan walfakkaataniidha, 2.9% - hojii dhanboota Iowa kan February keessa turaniidha.
Oromo News 04.16.21
By Fatiya Adam • Apr 15, 2021
Congerasiin torbaa tan Iowa Cindy Axne akka jetteti ijoolle baqattoota Iowa fudhachuu waan didaniif Governor Kim Reynolds akka muufatte himan.
Axne akka jetteti biyyatiiin baqqatoota seeran alaati kan walitti makamtee fi Iowa keessati kun akka sirreefamu kan barbaachisu ta’a.
Dabalataan Reynolds state ammati baqattoota ijoole qarqaaru akka hin dandeenne himan. Dhuma March tti, ijoolle baqattoota 18,000 ta’an border U.S – Mexico akka argaman himan.